पतिको मृ’त्यु भयो, सर्प चितामा ,स’तीमा सं’लग्न??? « गोर्खाली खबर डटकम
एक समय, जब पतिको मृ’त्यु भयो, श्रीमती पनि चि’तामा स’तीमा सं’लग्न भइन्। यस किसिमका कथाहरू कहिलेकाहिँ आज पनि सुन्न सकिन्छ। तर हालसालै मध्य प्रदेशको मु’रैनामा स’तीको कथा अगाडि आएको छ जुन सुन्न तपाईं छ’क्क पर्नुहुनेछ। अवस्था यो हो कि २०-२२ दिन अघि मु’रैनामा स’र्पको मृ’त्यु भएपछि उनको अ’न्त्येष्टि चि’त्तामा आफै पनि स’ती भयो।
स्था’नीय व्य’क्तिका अनुसार २०-२२ दिन अघि स’र्पको मृ’त्यु भएको थियो। उसको मृ’त्युको का’रण दु:खी, सर्प कुनै चीज नखाई नागको श’व नजिकै ब’स्यो। अन्तमा एक दिन गा’उँलेहरूले ना’गको दा’हसंस्कार गरे, तर सर्पले पनि चि’त्तामा जीवन दिं’दा ति’नीहरू छ’क्क परे।
मुरै’नाकी क’मला बाईले भने कि सर्पको ला’श चि’त्तामा ज’लाइएको थियो, सर्प पनि त्यहाँ आयो र चि’त्तामा घु’म्न था’ल्यो र अचा’नक हाम हालेर आफ्नो ज्या’न दियो। यस पछि, गाउँका म’हिलाहरूले स’र्पलाई सु’न्दर म’हिलाको रू’पमा स’जाए र उनको शरीर नागको अ’न्त्येष्टि गर्न चि’त्तामा राखिन्।
यो सर्प जोडी के हो
वा’स्तवमा, खे’रियाको मै’दानमा काम गरिरहेका एक जना यु’वकले एक दिन साँ’पको जो’डी देखे। अरूको इ’शारामा त्यो युवकले दुबै सर्पलाई ला’ठीले कु’टे र तिनीहरूलाई उठाएर फ्याँ’किदिए। भो’लिपल्ट त्यो जवान मानिसलाई स’र्पले भे’ट्टायो र स’र्पलाई त्यहीं टोक्यो तर सर्प जी’वित छ र ऊ मरेको स’र्पको नजिक ब’सिरहेको छ।
वास्तु शास्त्र अनुसार राति सिरानीमुनि यी चिज राख्नुहोस्, केही दिनमै चम्किनेछ तपाईको भाग्य
यस्तो सपना देख्नुभयो ? उसो भए तपाई चाडै धनी बन्दै हुनुहुन्छ